SLSA, chimiro cheGoogle chekudzivirira kubva pakurwiswa pane software yekupa cheni | Linux Vakapindwa muropa
SLSA, chimiro cheGoogle chekudzivirira kubva pakurwiswa pane software yekupa cheni
ari Vagadziri veGoogle vauya "SLSA" (Supply-cheni Matanho eSoftware Artifacts) iyo ine chinangwa chekutarisira iyo kuchengetedzwa kwezvivakwa zvekuvandudza yekurwiswa kunoitwa mukodhi, kuyedza, kuvaka uye kugovera nhanho yechigadzirwa.
Vagadziri taura kuti maitiro ekuvandudza ari kuramba achiomarara uye anoenderana nematatu-bato maturusi, iyo inogadzira mamiriro akanaka ekukurudzira kurwisa kwakabatana kwete nekucherechedzwa uye kushandiswa kwekusagadzikana mune chigadzirwa chekupedzisira, asi kuzvipira kweiyo budiriro nzira pachayo.
1 Nezve SLSA
1.1 SLSA nhanho 1
1.2 SLSA nhanho 2
1.3 SLSA nhanho 3
1.4 SLSA nhanho 4
Izvo zvinotaurwa kuti SLSA inotarisa pane anotevera maitiro akakosha anotevera:
Kwete One-Sided: Hapana munhu anogona kushandura iyo software yekugadzira chero kupi mune software yekupa cheni pasina kujekesa kuongorora uye mvumo kubva kune mumwechete "mumwe munhu anovimbwa". [^ 1] Chinangwa ndechekudzivirira, kudzivirira kana kuona kwekutanga njodzi / shanduko yakaipa.
Inonzwisisika - Iyo software yekugadzira inogona kuchengetedzeka uye pachena kudzoserwa kune yekutanga, masosi anoverengwa nevanhu uye kutsamira. Chinangwa chikuru ndechekushandisa otomatiki sosi uye ongororo yekuvimbika, pamwe nekuferefetwa kwehodhi.
Kuvharidzira kutyisidzirwa, SLSA inopa seti yematanho uye maturusi ekugadzirisa kugadzirwa kwemetadata yekuongorora. SLSA inopfupikisa zvakajairika nzira dzekurwisa uye inosvitsa pfungwa yezvikamu zvekudzivirira.
Chikamu chega chega chine zvimiro zvehurongwa hwezvivakwa kuti uve nechokwadi chekuvimbika kwezvinhu zvakagadzirwa mukusimudzira, ndokuti, iyo yepamusoro iyo inotsigirwa nhanho yeSLSA, hunyanzvi hwekudzivirira huchaitwa uye zvivakwa zvichadzivirirwa zvirinani kubva pakurwiswa chaiko.
SLSA nhanho 1
Pane ichi chinhanho inoda iyo yekuvaka maitiro kuti iite zvizere michina uye ibudise metadata ('Provenance') pamusoro pekuti maumbirwo akaunganidzwa sei, kusanganisira sosi, kuvimba, uye kuvaka ruzivo rwekuita SLSA 1 haisanganisi zvinhu zvekudzivirira kubva kune shanduko yakaipaIyo chete inoratidza iyo kodhi nenzira yakapusa uye inopa metadata yekusagadzikana manejimendi uye kuongororwa kwenjodzi.
SLSA nhanho 2
Pano pekutanga dura rinowedzerwa nekuda kwekushandisa sosi yekudzora sisitimu uye nekuvaka masevhisi anogadzira yakasimbiswa metadata. Iko kushandiswa kwe SLSA 2 inokutendera kuti utarise kwakatangira kodhi uye inodzivirira isingabvumirwe shanduko mune kodhi, mune nyaya yekushandisa yakavimbika masevhisi egungano.
SLSA nhanho 3
Kubva panguva inokana iyo sosi kodhi uye kuvaka chikuva zvinosimbiswa kusangana nezvinodiwa zvematanho kuona kuti kodhi inogona kuongororwa uye kuti kuvimbika kwemetadata yakapihwa kunovimbiswa. Ma Auditor anofanirwa kunge achikwanisa kusimbisa mapuratifomu ekutevedzera zvinodiwa nematanho.
SLSA nhanho 4
Iyi ndiyo nhanho yepamusoro uye ino pedzisa nhanho dzakapfuura nekuwedzera izvo zvakanyanya kuomeswa zvinodiwa izvo zvinotenderwa kuongororwa kweshanduko dzese nevakasimudzira vaviri vakasiyana, pamwe nematanho ese ekubatanidza, kodhi uye kutsamira. zvakaziviswa zvizere, kutsamira kwese kunofanirwa kuongororwa uye kutariswa zvakasiyana, uye maitiro ekuvaka anofanirwa kuitwa kunze kwenyika.
Kushandisa nzira yekudzokorora inodzokororwa zvakare kunopa kugona kudzokorora maitiro ekubatanidza uye kuona kuti izvo zvinogoneka zvakanyorwa kubva kunowanikwa kupihwa.
Pamusoro pazvo hwaro uhwu hunofunga mhando gumi nesere dzekurwiswa zvine chekuita nekutyisidzira kweshanduko yakaipa mukusimudzira, kuumbiridza, kuyedza uye kugovera nhanho yekodhi yechigadzirwa.
Mhando dzekurwisa dzinotorwa mukufungwa zvinotevera:
1.- Kubatanidzwa mune yekodhi kodhi yeshanduko ine backdoors kana latent zvikanganiso zvinotungamira mukusasimba.
2.- Kuzvipira kwenzvimbo yekudzora sosi.
3.- Ita shanduko mudanho rekuchinjisa kodhi kune iyo yekubatanidza kana inoenderera yekubatanidza system (iyo kodhi isingaenderane neiyo repodhi kodhi inounganidzwa).
4.- Kuzvipira kwepuratifomu yekuvaka
5.- Kukwidziridzwa kwemakodhi ane hutsinye kuburikidza neakaderera-mhando kutsamira.
6.- Kuisa zvivakwa zvisina kugadzirwa muCI / CD system.
7.- Kubvumirana kwepakeji repakeji.
8.- Kukanganiswa mumushandisi kuisa pasuru isiriyo.
Finalmente kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezvazvo, unogona kutarisa ruzivo Mune inotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » SLSA, chimiro cheGoogle chekudzivirira kubva pakurwiswa pane software yekupa cheni
Ubuntu Web 20.04.2 inosvika nechitoro chitsva, webhusaiti nyowani uye kwechinguva ichionekana neAnbox
Debian 10.10 inosvitsa kuchengetedzeka zvigamba, yakagadziridzwa kernel uye yazvino vhezheni yeFWUPD